अब लकडाउन लम्ब्याउने हो भने नागरिकहरुको हेरचाह गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । - बडिमालिका खबर
अब लकडाउन लम्ब्याउने हो भने नागरिकहरुको हेरचाह गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।
मन्त्रीहरु र नेताहरूको मनपरि ? अब लकडाउन लम्ब्याउने हो भने नागरिकहरूको हेरचाह गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।
अब लकडाउन लम्ब्याउने हो भने बाहिरी मुलुकहरू जस्तै नागरिकहरुको पालनपोषण र खातामा पैसा आदि आदि जस्ता सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सांसदहरूलाई मन्त्रीपरिषद बैठक, सुरक्षापरिषद बैठक, प्रतिनिधि सभा बैठक, प्रदेश सभा बैठक, सर्वदलीय बैठक र स्थायी समिति बैठक आदि आदि जस्ता बैठकहरु बस्न्लाई लकडाउन लागु नहुने ? सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई मात्र लकडाउन हो। सर्व साधारण नागरिकहरूले मात्र कष्ट र पिडा झेल्नुपर्ने होइन र ? अब मन्त्रीहरू र नेताहरूको अन्याय र अत्याचार अति नै भयो ।
लकडाउनमा सर्व साधारण नागरिकहरूलाई मात्र कडाइ गरेर समस्या समाधान हुन्न ? लकडाउनको कानुन र नियमहरु बनाउनेले पनि उल्लंघन गरेमा पनि कार्वाही हुनुपर्छ ।लकडाउनमा हत्या, हिंसा र कालोबजारी बढेको छ ।
लकडाउनको समयमा मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, सांसदहरु र नेताहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक, सर्वदलीय बैठक, स्थायी समिति बैठक, मन्त्रीपरिषद बैठक र सुरक्षापरिषद बैठक आदि आदि जस्ता बैठकहरुको बैठक भत्ता लिने गरेको छ की छैन ?
लकडाउन भनेको छ कडाइ गर्ने मात्र भनिएको छ । लकडाउनका कारण थुप्रै कठिनाइ र जोखिम आउने स्थिति देखिएको छ । यसको निकास र समाधान के ?
क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकहरु माथी लापरबाही भइरहेको जनगुनासो पनि आइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन किन ? क्वारेन्टाइन बाट भाग्नुको कारण के ? क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र क्वारेन्टाइनमा सेवा सुविधाहरु हुन आवश्यक छ ।
कोरोना भाइरसले भन्दा नागरिकहरुलाई चिन्ताले बढी सताएको छ । मानिसलाई रोगले भन्दा शोक र चिन्ताले बढी गलाएको छ। लकडाउन पश्चात झनै कोरोना संक्रमित र मृत्यु संख्या बढेको देखियो । रोग निर्मुल कहिले पनि हुँदैन यसकारण अब सुरक्षित ढंगले नागरिकहरुले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो । लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन।
स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:
राकेश कुमार शर्मा
जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-०२
मोबाइल नम्बर ९८४८०५५७७६, ९८१२४९१३९७
क्वारेन्टाइनमै एक महिलाको मृत्यु
अछाममा थप नौ जनामा कोरोना पु’ष्टि
प्रधानसेनापति पुर्ण चन्द्र थापा बाजुरा पुगेर जवान सँगै खाए खाना
बाजुराकी एक किशोरी लागुऔषध सहित ललितपूरमा पक्राउ
बाजुरा : बैक अगाडीबाट एक महिलाको पैशा चोरी गरेर भागेका युवक पक्राउ
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु
भारतबाट हतियार ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति पक्राउ
अनुगमनका क्रममा घुस लिएको आरोपमा ४ कर्मचारी पक्राउ
आयुर्वेदिक महत्वको गौमूत्र : वैज्ञानिक दृष्टिमा के–के छन् फाइदा ?
गौरीगंगा नगरपालिकाले लुकायो प्रतिवेदन, कोभिड नियन्त्रण गर्न ४ महिनामा सवा १ करोड
रत्न माध्यामिक विद्यालयमा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
नेपाल खुल्ला विश्व विद्यालयले भब्य अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै
प्रमोद भट्टराईका केही साइनोहरु
नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य शाहीको भोली गोदावरीमा दाहसंस्कार हुने
अर्जुन रोकायाको पबित्र गौमुलको भुमी देउडा गित सार्बजनिक ( भिडियो सहित)
सचिवालय बैठक सकियो : अब नेकपा संकटको समाधान स्थायी कमिटीबाट
डोटीमा भएको फुटवलमा बाजुराको रानीबन फाइनलमा
सुदूरपश्चिममा २ वर्षमा साढे ६ हजार छाउगोठ भत्काइयो, भत्किएन कुप्रथा